शिवराजका ११ मध्ये ६ र ७ वडा मात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकि – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर शिवराजका ११ मध्ये ६ र ७ वडा मात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकि
शिवराजका ११ मध्ये ६ र ७ वडा मात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न बाँकि
नेपाललाई पूर्ण खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार शिबराज नगरपालिकाले यो अभियानलाई सशक्त रुपमा अंगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाको वडा नंं ८ लाई मंगलबार एक कार्यक्रमका बिच खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । यो वडा संगै शिवराज नगरपालिकाको ११ वटा वडा मध्ये ९ वटा वडा खुल्ला दिसा मुक्त वडा भएका छन् ।
बाँकी रहेका वडा नं. ६ र ७ लाई पनि छिट्टै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुरुप काम भइरहेको उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले बताईन । घोषण सँगै आगामि दिनमा शौचालयको नियमित प्रयोग हुनुपर्ने, शौचालयको सहि प्रयोग भए नभएको अनुगमन गरिने र अब खुलाठाँउमा दिसा गरेको पाईए कारवार्ही समेत हुने नगरउप प्रमुख थारुले बताईन् । कार्यक्रममा बोल्दै थारुले सबैले आफ्नो आनीबानीमा परिर्वतन ल्याई शौचालयको प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
वडा नम्बर ८ मा रहेका कुल ७०२ घरमा शौचालय निर्माण भएको प्रतिबेदन वडा अध्यक्ष शंकर अहिर प्रस्तुत गरे । वडा नं. ८ लाई खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा बनाउन सहयोग पुराउने सम्पूर्ण वडा बासीलाई उनले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् । अब शौचालयमा नै गएर दिसा गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने अध्यक्ष अहिरले वडा बासीमा अनुरोध पनि गरे । कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिका सरफाइ दुत महादेव पोखरेलले लामो प्रयास पछि वडा लाई खुल्ला दिसा मुक्त बनाउन सकिएको बताए । सरसफाई र आनीबानीमा परिर्वतन गर्दै अब पूर्ण सरसफाई घोषणा तर्फ लाग्नु पर्नेमा पोखरेलले जोड दिए । अब सम्पूर्ण नगरपालिका लाई खुला दिशा मुक्त गर्न सबै एकजुट भएर लागेर नगरपालिकालाई खुला दिसा मुक्त गराउन तर्फ सबैको ध्यान जानु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेषकान्त पौडेल, वडा नं. ६ का अध्यक्ष सन्तरी प्रसाद कुर्मी, वडा नं. ७ का अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरी, वास अफिसर राजेश चौधरी, स्वस्थ्य स्वयम् सेविका, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, वडा बासी संचारकर्मीको उपस्थितीमा वडालाई खुल्ला दिसा मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।